Su'aalaha La Weydiiyo - Guangzhou Danye Optical CO., LTD
Maxay yihiin qiimahaaga iyo tirada ugu yar ee dalabku (MOQ)?
Waxaan si toos ah u siinnaa qiimaha warshadda iyadoo loo eegayo tirooyin kala duwan, MOQ waa 1 unug;
Haa waxaan nahay soosaaraha xirfadleyda ah iyo dhoofiyaha isku dhafan cilmi baarista, horumarinta, waxsoosaarka, suuqgeynta iyo adeegga; waxaan leenahay khibrad hodan ah iyo aqoon uruursi warshadaha qurxinta in ka badan 11 sano; warshadda waxaa lala xisaabtamayaa alaab-qeybiye la isku halleyn karo oo ah shirkadda caanka ah ee TUV iyo SGS;
Waa maxay qalabkaaga ugu muhiimsan?
Shirkadeena waxay diirada saareysaa tayada sare ee qalabka quruxda, qalabkeena ugu muhiimsan waxaa ka mid ah 808nm laser diode, CO2 laser fractional laser, Q switch yag laser, qalabka qaboojinta maqaarka cryo, 360 cryolipolysis, Thermagic RF, OPT, multifunctional device iwm;
Waa maxay damaanad sheygaagu?
Caadi ahaan waxaan bixinnaa 1-2 sano oo damaanad ah iyada oo loo eegayo noocyo kala duwan oo mashiinno ah; inta lagu jiro dammaanadda, qaybaha dayactirka waa bilaash oo la beddelaa;
Amarka ugu yar sida caadiga ah waqtigeenna hoggaamintu waa 3-7 maalmood, amarro tiro badan waxay kuxirantahay xaaladda wax soo saarka hadda iyo shuruudaha gaarka ah ee macmiilka;
Caadi ahaan waxaan aqbalnaa wareejinta bangiga (T / T), bixinta internetka, midowga reer galbeedka, hababka kale ee lacag bixinta ayaa ka sii wada hadli kara;
Dhigaalka 50%, 50% dheelitirka kahor bixinta;
Waa maxay habka dhoofinta iyo khidmadda rarka?
Caadi ahaan dhowr dariiq oo rar ah oo tixraac ah: macaamiisha waxay doortaan xawaare dhakhso ah oo u furan adeegga albaab ilaa albaab, ama xamuul hawo tartan ah oo ka socda albaab ilaa adeegga garoonka diyaaradaha, ama xamuul badeed qiimo jaban min albaab ilaa adeegga dekedda ah; khidmadda dhoofintu way ka duwan tahay sida ku xusan habka maraakiibta kor ku xusan, wixii faahfaahin ah fadlan na weydii;
Adeegga OEM iyo ODM ayaa la heli karaa?
Haa, labada nooc ganacsiba waa la heli karaa, maxaa intaa ka badan, maadaama soo saaraha aan wali bixin karno xal dhameystiran oo ay ku jiraan naqshadeynta softiweerka, naqshadeynta qalabka dhismaha, qaabeynta jirka, qaabeynta qaabdhismeedka shuruudaha la habeeyay; ku soo dhawow baaritaanka;
nagu soo biir, abuur mustaqbalka quruxda dhalaalaya;